काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी बढिरहेको छ । मृत्यु र संक्रमित हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसबीच थुप्रै खाले अध्ययन अनुशन्धानहरु पनि भैरहेका छन । पछिल्लो समय दोहोरिएर कोरोना संक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको छ । शरीरमा हुने कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने एन्टिबडी समाप्त भएपछि कोरोना संक्रमण दोहोरिएको हो ।
लण्डनमा भएको पछिल्लो अध्ययनबाट यस्तो खुलासा भएको हो । अध्ययन अनुसार लक्षण देखिएका संक्रमित विरामीको तुलनामा बिना लक्षणका विरामीहरुको शरीरमा रहेको एन्टिबडी छिटो समाप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण दोहोरिने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
ईम्पेरियल कलेज लण्डन र मार्केट रिसर्च फर्म ईम्पोसिस मोरीले यस्तो अध्ययन गरेको हो । ७५ बर्ष या यसभन्दा बढी उमेरका कोरोना संक्रमित विरामीहरुभन्दा १८ देखि २४ बर्ष समुहका संक्रमित विरामीहरुको एन्टिबडी समाप्त हुने गति कम भएको अनुशन्धानमा संलग्न ईम्पेरियल कलेज र ईम्पोसिस मोरीका अनुशन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन ।
जुन महिनाको मध्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म ईङ्ग्ल्याण्डमा संकलन गरिएका लाखौं कोरोना संक्रमित विरामीहरुको नमुनाको अध्ययनले शरीरमा एन्टिबडी भएकाहरुको संख्या लगभग ३ महिनाको अवधिमा २६.५ प्रतिशतले कमी आएको पुष्टि भयो । २० जुनदेखि २८ सेप्टेम्बरसम्म गरिएको यो अध्ययनमा ३ लाख ६५ हजार बयस्कहरु सहभागी भएका थिए । उनीहरुको ३ पटकसम्म एन्टिबडी परीक्षण गरिएको थियो ।
मानिसको शरीरमा लामो समयसम्म एन्टिबडी रहने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै पुष्टी नभएको अनुशन्धानकर्ताहरुले बताएका छन । ब्रिटेनका सहायक स्वास्थ्य मन्त्री जेम्स बेथेलले कोरोना भाइरसविरुद्ध विकसित हुने एन्टिबडीका बारेमा जान्न र बुझ्न यो अध्ययन सहयोगी सावित हुने बताए ।
इम्पेरियल कलेज लण्डनको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका एक विज्ञ पाल एलियटले भने, “शरीरमा एन्टिबडीको उपस्थिति कति मात्रामा रहन्छ ? र इम्युनिटी कहिलेसम्म रहन्छ ? भन्ने विषय अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।”
एन्टिबडी भएकाहरुको संख्या २६.५ प्रतिशतले कमी हुनुको अर्थ देशमा एन्टिबडी भएकाहरुको संख्या ६ प्रतिशतले घटेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको अनुशन्धानकर्ताहरुले बताएका छन । यस अध्ययनका एक लेखक हेलेन वार्डले बताए अनुसार यो अध्ययन एक बृहत अध्ययन हो ।
यो अध्ययन अनुसार एन्टिबडी भएकाहरुको संख्या दिनानुदिन घट्दै गैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो र अरुको स्वास्थ्यका लागि सजग हुन सबैखाले सावधानीहरु अपनाउनु पर्ने हेलेन वार्डलाई उद्धृत गर्दै मेडिकल एक्स्प्रेसले जनाएको छ । मेडिकल एक्स्प्रेस